Ukuhlaziywa kwemihla ngemihla yeMithetho elishumi
Ziyintoni iMithetho Elishumi?
Ukuhlaziywa kwemihla ngemihla yemiyalelo elishumi
Imithetho Elishumi, okanye iMibhile yoMthetho, yimiyalelo uThixo awayinika abantu bakaSirayeli ngoMoses emva kokubakhokela eYiputa. Kubhalwe kwi-Eksodus 20: 1-17 kunye noDuteronomi 5: 6-21, ngokwenene, iMithetho Eyishumi isishwankathelo semithetho yemithetho efumaneka kwiTestamente Elidala. Le miyalelo ithathwa njengesiseko sokuziphatha, ngokomoya nokuziphatha ngendlela yamaYuda kunye namaKristu ngokufanayo.
Ngelwimi lokuqala, iMithetho Eyishumi ibizwa ngokuba yi "Decalogue" okanye "Amazwi ayishumi." La mazwi alishumi athetha nguThixo, umniki-mthetho, kwaye akuzange kube ngumphumo wokumisa abantu. Babhalwa kwiipilisi ezimbini zamatye. I-Baker Encyclopedia yeBhayibhile iyachaza:
"Oku akuthethi ukuba imithetho emihlanu ibhaliwe kwipilisi nganye; kunoko, zonke ezi-10 zabhalwa kwipilisi nganye, i-tablet yokuqala kaThixo ngumniki-mthetho, isibhengezo sesibini sikaSirayeli ummkeli."
Uluntu lwanamhlanje lubandakanya ukungalingani kwenkcubeko , okuyiyo ngcamango ephikayo inyaniso. AmaKristu kunye namaYuda, uThixo wasinika inyaniso epheleleyo kwiLizwi likaThixo eliphefumlelweyo. NgeMithetho Eyishumi, uThixo wanikela ngemigaqo esemgangathweni yokuziphatha ukuze uphile ubomi obunene nobomi. Le miyalelo icacisa imilinganiselo yokuziphatha uThixo ayenenjongo kubantu bakhe.
Imithetho iyasebenza kwimimandla emibini: ezintlanu zokuqala ezinxulumene nolwalamano lwethu noThixo, ezintlanu zokugqibela zijongene nolwalamano lwethu nabanye abantu.
Ukuguqulelwa kweMithetho elishumi iyakwazi ukuhluka ngokubanzi, ngezinye iifom ezizwakalayo zingaphi kwaye zitshintshelwe kwiindlebe zanamhlanje. Nantsi ingcaciso yelimihla yeMithetho elishumi, kuquka iinkcazo ezimfutshane.
Musa ukunqula naluphi na omnye unkulunkulu ngaphandle koThixo oyinyaniso. Bonke oothixo boothixo bobuxoki . Unqula uThixo wedwa.
Musa ukwenza izithixo okanye imifanekiso ngohlobo lukaThixo. Isithixo sinokuba nayiphi na into (okanye nantoni na umntu) unqula ngokuyenza ibaluleke ngaphezu koThixo. Ukuba into ethile (okanye umntu) inexesha lakho, ingqalelo kunye nokuthanda, kunqulo lwakho. Ingaba isithixo ebomini bakho. Ungavumi nantoni na ukuba ithathe indawo kaThixo ebomini bakho.
Musa ukuphatha kakubi igama likaThixo okanye ukungahloneli. Ngenxa yokubaluleka kukaThixo, igama lakhe lihlala lithetha ngokuhlonela nangenhlonipho. Hlala uzukisa uThixo ngamazwi akho.
Ukunikezela okanye ukubeka eceleni usuku oluqhelekileyo nganye iveki yokuphumla kunye nokunqula kweNkosi.
Nika uyihlo nonina imbeko ngokubaphatha ngenhlonipho nangokuthobela.
Musa ukubulala ngamabomu umntu. Ungabathiyi abantu okanye ubaphathe kakubi ngamazwi nangezenzo.
Musa ulwabelana ngesondo kunye nabani na ngaphandle kweqabane lakho. UThixo unqabela ukulala ngaphandle kwemida yomtshato . Hlonipha umzimba wakho kunye neminye imizimba yabantu.
Musa ukuba okanye ukuthatha nayiphi into engekho kuwe, ngaphandle kokuba unikwe imvume yokwenza njalo.
Musa ukuxoka ngamanga ngomntu okanye uzise umangalelwa ngamanga ngomnye umntu. Njalo xelela inyaniso.
Unganqweneli nantoni na okanye nawuphi na ongekho kuwe. Ukuzifanisa nabanye kunye nokulangazelela ukuba nezinto abanokuzenza zibe nomona, umona, kunye nezinye izono . Qineliswa ngokugxila kwiintsikelelo uThixo akunike zona kungekhona oko akunikanga. Yibulela into uThixo akunike yona.
KwabaseGalatiya 1: Isahluko seSahluko seBhayibhile
Yintoni umnqophiso? Ithini IBhayibhile?
Iiminyaniso zeBhayibhile kwiSibling Ukuphikisana
I-King James Version (KJV)
Abaninzi Abafazi bakaDavide eBhayibhileni
INdodana yoShahlalo Indaba - Luka 15: 11-32
AmaRoma 14 Imiba - Yintoni endiyenzayo xa iBhayibhile ingacacini?
Umthendeleko weTabernacles (Sukkot)
UYesu ekuhlawuleni iintlawulo kuKhesare (Marko 12: 13-17)
IBhayibhile YeNtsha Yonyaka
Iidethi zeeKhalenda zeDeveli
5 Iingcebiso ze-Toasty zokuhlala zifudumele kwiHlabathi yeHlabathi
Isixhobo seMbali kunye neProfayili
Uhlalutyo lukaFlannery O'Connor's 'Good Country People'
Imihlobiso yeHlabathi yamaHlathi e-Crystal
I-ABCs of Teaching: Ukuqinisekiswa kootitshala
2 Iifomu zeNgqungquthela engaphelelanga ngeSpanish
I-Dinosaurs kunye Nezilwanyana Zokuqala ZaseGeorgia
Imizekelo yeePolisi zePolar kunye namaNyumba
Ukufika kweeveli zonyaka
Iingcaciso kunye neengcamango ze-Melody
Fat ngoLwesibili Recipes
Indlela yokudweba iiKhathuthi zeDummies I-Step-by-Step
I-Bronsted-Lowry Acid Definition
IsiShayina IsiGama: iMigomo yezoNyango
U-Antoni Gaudi, i-Art and Architecture Portfolio
Ngaba Ufanele Ucele Umncedisi Wokufundisa kwiNcwadana yoNcoma?
Funda ngeMbali yokuQala yeLwimi yeNkqubo yeJava
Iintlobo ze-Asian Traditional Headerar okanye iiHats
Indlela yokudibanisa isenzi esingaqhelekanga sesiFrentshi 'Soutenir' ('ukuxhasa')
Ngaba i-Essay Application ingaba yedwa okanye idluliselwe kabini?
Isicwangciso sokuLawula ukuziphatha kwe-Turn-A-Card
Ukusebenzisa isenzi 'Gustar'
Funda iNew War Wars Way: Isikhokelo ku-Aurebesh
Amagama esiHebhere amaGrike (NZ)